Amathathu nelingatyabuli kakhulu self balancing ngezithuthuthu ngokutsha - Jomo Technology Co., Ltd
Le hoverboard bamkelekile ngabantu abaninzi abatsha, ngenxa yokuba ndizuze engenasiphelo noyolo yaye phezu ekhwele hoverboard, kodwa ukukhetha indlela isithuthuthu ekhuselekileyo self balancing? Ngoku makhe sincome amathathu nelingatyabuli kakhulu self balancing isithuthuthu kuwe. Eyokuqala i KOOWHEEL uphawu Self Ukuxhathisa Board K7 kunye ul 2272 Certification kanye LG ibhetri smart. I- 2 Wheel Self Ukulinganisela Isithuthuthu K7 Bluetooth ezimbini esijikelezileyo 8.5inch Good Self Ukulinganisela Isithuthuthu Hoverboard Tyres Solid Hummer- namava ngcono kuwe! It sibonisa iteknoloji eyahlukileyo kancinane kunezinye hoverboards, evumela ukuba ukusebenzisa iinjini ezinamandla ngakumbi, amavili 8.5inch kumnandi kwi ubumdaka kunye nengca, nangona, kungekhona ukuba sawa, uya kuhlala kakhulu zisisa zokusebenzisa kolwabelo olungalinganiyo. Emva kosuku okanye ehanjiswayo, sakwazi ukufumana 15-20km yale hoverboard. Kakhulu Velocity kwayo 12km ngeyure. Kungase okungenzeka ngohambo nawuphi na umgangatho kwaye phezulu okusenza ngenxa iinjini ezinamandla. Yinto amandla omlingo ukuthatha ukuhlanganiswa kuwe ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, engalelwa bani ngokupheleleyo phantsi kwakho apho. Le hoverboard esabela imiyalelo yakho impela nje kwaye ayithethi kuthatha ixesha elide lokuqonda.
Enye usungule KOOWHEEL hoverboard self-balancing K5 UL2272 kunye ASTM nezatifikethi kunye Bluetooth ezimbini kunye nezibane LED. Kwakhona unalo Handle embindini, kulula kakhulu ukuba. Kwi ubuchwepheshe, seemodyuli isakhiwo, kobeka phi iintambo,, kakhulu nesiphene bathobe ngakumbi ekhuselekileyo (3 amawaka ngalinye) kunye womelele ngakumbi. Le hoverboard self-balancing luhlobo eyodwa yokuthutha ingene apho edolophini logama nje ibhetri yakho yombane uwugcina ihamba. Ngayo ibhayisekile izandla-free ngama- imisebenzi ngosuku ngalunye ezifana emsebenzini, sokuzikhethela, okanye akuyi ndawo enye jika ngasekunene abe inxaxheba intle nobanelisayo.
Koowheel mva usungule yokusonga scooter yombane kunye lomenzi kuyilo cool nendlela Innovative leyo evumela ababhekisi phambili ukuba kanye kakuhle izinto ezintsha. Its LED isikrini kubonisa ngokupheleleyo ibhetri nesantya. Ukukhanya kodwa sinamandla.
Xa sithetha nje ngokubanzi, eli hoverboard Segway ubeke iimfuno uyingangamsha inkqubela eyenzekileyo kwezobuchwepheshe kunye nokuzonwabisa. Okokugqibela le ngxelo odumileyo ukuba Segway inokuhlanganisana ezininzi eziyimfuneko ukuhamba ukuba imarike ebanzi, ukuze kube lula ukudluliselwa iintlobo ezahlukeneyo yokuthutha, bakhonza njengelalela kwizithuthi.